Shacab ka Soomaaliyeed oo aad oga naxay Go’aan ka soo baxay Turkiga Dowladda oo ka hadashay. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Shacab ka Soomaaliyeed oo aad oga naxay Go’aan ka soo baxay Turkiga...
Shacab ka Soomaaliyeed oo aad oga naxay Go’aan ka soo baxay Turkiga Dowladda oo ka hadashay.
Muqdisho (Caasimadatimes)-Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaailya ee dalka Turkiga oo la hadlayey warbaahinta dowladda ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed uusan wax saameyn ah ku yeela doonin go’aankii dhawaan ay soo saartay dowladda Turkiga ee ahaa inaan ikhaamada la sii doonin dadka dalxiiska ku gala dalkaas Turkiga
Ambassador Cabdullaahi Jaamac Maxamed (Ceydiid) ayaa sheegay in uu maanta la kulmay madaxa hey’adda Socdaalka Turkiga, isla markaana uu u cadeeyey in dadka Soomaaliyeed uusan saameyn doonin go’aan dowladda Turkiga ay ka soo saartay arinkaas.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa sheegay in madaxa hey’adda socdaalka Turkiga uu kala hadlay sidii Visaha loogu fududeyn lahaa wakhtigana loogu kordhin lahaa dadka caafimaadka u yimaada dalkaas.
“Sannadkaan 2019 in ka badan 11 kun oo Soomaali ah ayaa dalbatay dal ku galka Turkiga (Visa), waxaana la siiyey in ka badan 7 kun oo Soomaalida wata Baasaboorka Soomaaliga” ayuu yiri Ambassador Ceydiid.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dhowr dal uu uu xiriir gaar ah kala dhexeeyo dalka Turkiga.
Previous articleDaawo sawirro murugo leh sida uu u saameeyay soomaalida dabkii daarta Minneapolis
Next articleWAR DEG DEG AH:Jeneraal ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka oo goor dhow Muqdisho lagu dilay
Muungaab Oo shaciyey Cidda ka danbeysa Qaraxii Sababey Geerida Yariisow
Madaxweynaha Puntland oo Magacaabey taliyeyaal Ciidan Yeese kala yihiin?